Tsy nandaitra ny herin’ilay mpampandro dahalo: mpanao odibala, maty voatifitra | NewsMada
Mpampandro dahalo sy malaza ho mpimasy mpamatsy odigasy sy odibala ireo dahalo no lavon’ny balan’ny zandary tao Anterimihila, kaominina Mahazoarivo, distrikan’Isandra, ny faran’ny herinandro teo. Basy Kalachnikov iray sy basy vita gasy telo tratra…
Nahazo angom-baovao ireo zandary miasa ao amin’ny borigady Ma­ha­zoarivo fa nisy nahatsikaritra ao an-toerana ity mpimasy mpampandro dahalo ity sady lehiben’ireo dahalo avy ao amin’ny kaominina ambanivohitr’Ambalamidera. Voalazan’ny zandary fa sady mpamatsy basy mahery vaika ity dahalo ity no atidoha nikotrika ireny fikomian-dahalo tao Isandra tamin’iny taon-dasa iny. Ireo dahalo mampihorohoro ny distrikan’ Isandra sy Ikalama­vony no am­pandroan’ity dadarabe ity, raha ny fampitam-baovao vo­a­ray hatrany. Tsiahivina fa efa nosamborin’ny zandary ity malaso ity, ny volana janoary lasa teo noho ny fihazonana fitaovam-piadiana ma­hery vaika sy firaisaina tsi­kombakomba tamina fanafihana mitam-piadiana tany Isorana. Natolotra ny fampanoavana izy ka naiditra am-ponja vonjimaika, saingy nahazo fahafahana vonjimaika indray izy, ny volana avrily lasa teo.
Nikasa hitsoaka tao anaty fifanjevoana…
Nidina tao amin’ny toerana voatondro ho misy ilay mpimasy ny zandary ka hita tao an-tranony izy miaraka tamin’ny basy Kalachnikov iray misy bala 10, basy vita gasy iray ary basim-borona tsy ara-dalàna roa. Nikasa hanao kolikoly tamin’ireo zandary ity mpimasy ity noho ireo zavatra hita tao aminy, saingy tsy nanaiky izany ny zandary, raha ny tatitra voaray. Nentina na­monjy ny biraon’ny zandary ny tenany, kanjo nisy andian-dahalo nirongo basy nanakana sy nitifitra ireo zandary mba hanavotra ity lehiben’izy ireo ity. Raikitra ny fifanjevoana ka nanararaotra nitsoaka izy, saingy tsy lasa lavitra dia lavon’ny zandary. Efa be ihany ireo mpampandro dahalo lavon’ny zandary kanefa tsy mety mahafay ny sasany izany satria toa vao mainka mihamirongatra ha­trany ny fisian’ireo mpimasy milaza azy ho mpampandro sy mpamatsy odigasy ireo dahalo.